မြန်မာနွယ်ဖွား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမီမီဝင်းဘတ် (Dr. Mie Mie Win Byrd)
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲအတွက် နိုင်ငံတကာ ဖိအားဟာ အင်မတန် အရေးပါတယ်၊ ဒီအတွက် အမေရိကန်အစိုးရက ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အာရှ-ပစ္စိဖိတ် လုံခြုံမှုလေ့လာရေးဌာန ပါမောက္ခ မီမီဝင်းဘာ့ခ် က ဆိုပါတယ်။ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်နဲ့ ဖီဆန်ရေးအင်အားစုတို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်း တချိန်က မြန်မာစစ်အရာရှိတွေကို ပညာသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး (အငြိမ်းစား) မီမီဝင်းဘာ့ခ် က နှိုင်းယှဉ်ထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ပါမောက္ခဘာ့ခ် နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ပါမောက္ခမီမီဝင်းဘာ့ခ် ခင်များ နိဒါန်းနည်းနည်းပြောစေချင်တာကတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်ပြီကတည်းကစပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်နဲ့ အမေရိကန်စစ်တပ် စစ်တပ်ချင်း ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ ပုံစံတရပ် ရှိခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာကို အကျဉ်းရုံးလေးပြောပါ။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ရှိခဲ့သလဲ။ အခုတော့ ပျက်သွားပြီပေါ့။
ဖြေ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ transition အချိန်မှာ ကျမတို့က military-military engagement လို ပုံစံမျိုး လုပ်တဲ့အခါမှာ တချို့မြန်မာအရာရှိတွေ ကျမတို့ရဲ့ စင်တာမှာ လာပြီးတော့ ကျောင်းလာတက်ကြတယ်။ သူများတွေက ခဏခဏပြောတာ ဒီဟာက training ဆိုကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါ training မဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့က education ပညာရေး ဖြစ်တယ်။ ပညာသင်ယူကြတာ။ ကျမတို့ သင်ပေးတာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး။ နောက်ပြီးတော့ civil-military relation ဒီမိုကရေစီအစိုးရအောက်မှာ အရပ်ဘက်-စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာကို တင်ပြတာ။
မေး ။ ။ အဲဒီဆက်ဆံရေးက အခုတော့ ပျက်သွားပြီပေါ့။ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်ရှင့်။ အခုအချိန်မှာ US ကနေ အားလုံး sanction လုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ကို။
မေး ။ ။ အခု ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ပြီးနောက်မှာ မြန်မာစစ်ကောင်စီက ရုရှားကို အပြတ်အသတ် ထောက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးက ပိုပြီးအလှမ်းဝေးသွားတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား။
ဖြေ ။ ။ ရုရှားကို ထောက်ခံလို့ အမေရိကန်နဲ့ ဝေးတာက ဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး။ ပိုပြီးတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဝေးသွားတဲ့ဥစ္စာက အာဏာသိမ်းတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေက ပိုပြီးတော့ အရေးကြီးတယ်။
မေး ။ ။ တချို့က ပြောကြတယ် - အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ကောင်စီအပေါ် အရေးယူမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ် တက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာ သိပ်ထိရောက်မှု မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ မြန်မာပြည်သူ တော်တော်များများက ညည်းတွားကြပါတယ်။ ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ ဒီပြောဆိုချက်တွေကို ဘယ်လိုပြောလိုပါလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမတို့ သမိုင်းမှာ အောင်မြင်သွားတဲ့ တော်လှန်ရေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျမတို့ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုရင် အဲဒီမှာ အဓိက (၃) ချက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတချက်က ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန့်ကျင်မှု - ပြည်သူလူထု အများကြီးရဲ့ ဆန့်ကျင်မှု။ နောက်တချက်ကတော့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ဖိအား။ နောက်သုံးချက်မြောက်ကတော့ defection - စစ်တပ်နဲ့ ထိပ်တန်းလူတွေ ဘက်ပြောင်း၊ စွန့်ခွါမှု။ အဲဒီအချက် (၃) ခုကို သွားတွေ့တယ်။ ဆိုတော့ ဒီမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ ဖိအားက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအချက်ကြောင့်လဲ အမေရိကဘက်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖိအားပေးရမလဲဆိုတာကို ဆောင်ရွက်နေတယ်။ အဲဒီမှာ Sanction ပိတ်စို့မှုတွေလည်းပါတယ်။ နောက် Diplomatic သံတမန်ရေးနည်းနဲ့ အာဆီယံနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဥရောပတို့နဲ့ အတူတူပေါင်းပြီးတော့ ဖိအားပေးလုပ်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ ဖိအားက အများကြီးရှိလာတာ။
မေး ။ ။ အခုန မီမီပြောတဲ့ (၃) ချက်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန့်ကျင်အုံကြွမှု - အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆန့်ကျင်အုံကြွမှုကို တွေ့နေရတယ်လို့ ကျနော်ကတော့ သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့ မြင်မိပါတယ်။ ဆိုတော့ ဖိအားကကော လုံလောက်တဲ့ ဖိအား enough pressure ရှိပါရဲ့လား။ လူတွေက ညည်းတွားကြတယ် - အဲဒီဥစ္စာကို အဲဒါထက်ပိုပြီးတော လုပ်သင်တယ်။ အမေရိကန်တို့က ဖိအားပိုပေးသင့်တယ်။ အပြောသာများနေပြီးတော့ လက်တွေ့နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီကိစ္စကို သိချင်တာပါ။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးအရ ဒဏ်ခတ်ပိတ်စို့တဲ့နေရာမှာ ရေနံတို့ ဘာတို့ဆိုရင် အမေရိကန်က မပိတ်စို့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
ဖြေ ။ ။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန US State Department က နောက်ထပ် Sanction တသုတ် ထပ်လာပြန်ပြီ။ ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တင်းကြပ်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ် - ရေနံကိုလည်း သူတို့ထိန်းချုပ်ပါမယ်။ သူတို့ အဲဒီကိစ္စကို အများကြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ ရေနံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ နည်းနည်းလေး Tricky ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ Energy Sector မှာ မစဉ်းစားဘဲ လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သံတမန်နဲ့ ဖိအားထဲမှာ သွားပြီးတော့ ငြိ့နိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူတို့ ဒီအပိုင်းကို အများကြီးစဉ်းစားပြီး၊ အများကြီးဆွေးနွေးပြီး လုပ်စရာတွေ အများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ ကျမ တွေ့မိတယ်။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့လဲ တခုစဉ်းစားမိတာက အခု ရုရှားနဲ့ ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရုရှားရဲ့ ရေနံကို ဒဏ်ခတ်လိုက်တယ်။ အမေရိကန်ထက်ပိုပြီးတော့ ဥရောပနိုင်ငံတွေက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပိုပြီးတော့ အခက်ကြုံရတယ်။ ဆိုတော့ ရေနံက ဘယ်ကရရ ပိုပြီးတော့ လိုအပ်နေတဲ့သဘော။ တလောတုန်းကဆိုရင် အမေရိကန်သမ္မတ Joe Biden က Saudi Arabia တို့ အပါအဝင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကို ရေနံ ပိုပြီးတော့ ထုတ်ပေးဖို့အတွက် ချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာကို ကြားရပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေက လက်မခံကြဘူးတဲ့။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ရေနံက ဘာပဲပြောပြော သူတို့အတွက် ပိုပြီးလိုအပ်နေလိုများ သူတို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြတာလား။
ဖြေ ။ ။ အဲဒီအတွက်ကတော့ ကျမ အသေအချာ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သံတမန်အရေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးကလည်း ပါသေးတယ်။ ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းကြတော့ ကျန်နိုင်ငံတွေက စုပေါင်းပြီးတော့ ညီညွှတ်စွာလုပ်ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တူညီတဲ့ စုစည်းမှုကို သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ အဲဒီဥစ္စာကိုများ ဝိုင်းကြိုးစားနေကြတယ်။ အဲဒီအပိုင်းကို တွက်နေတယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စောစောက မီမီပြောတဲ့ အချက် (၃) ချက်ထဲမှာ ဆန့်ကျင်မှုရယ်၊ ပြင်ပဖိအားရယ်၊ နောက်ဆုံးအချက်က ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ Defection - စစ်တပ်နဲ့ Elite ဆိုတော့ ကျနော် နားလည်တာက ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလား။ ရားမို့စ် … မားကို့စ်တို့တုန်းက Defect - ဘက်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်။ ပြည်သူဘက်ကို ဘက်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်။ အဲဒီပုံစံမျိုးကို ပြောတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာကော အဲဒီလို ဖြစ်နိုင်မယ့် အလားအလာ ရှိပါသလား။
ဖြေ ။ ။ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ Defection နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အများကြီး ထွက်လာတယ်။ ထွက်လာတဲ့ လူတွေကိုလည်း မေးလိုက်လို့ရှိရင် သူတို့ကပြောတာက အထဲမှာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ထွက်ချင်နေပြီ၊ သူတို့မလုပ်ချင်ကြတော့ဘူး။ တချို့တွေက အမျိုးမျိုးကြောင့် မထွက်နိုင်လို့သာ နေနေရတာ၊ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ် မရှိကြတော့ဘူး။ စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာက စိတ်ဓါတ်မရှိလို့ရှိရင် တိုက်ရတာ မလွယ်ဘူး။ နိုင်ဖို့က မလွယ်ဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Elite အထက်တန်းလွှာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အခုတလောမှာ ခရိုနီတွေ - Elite ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို ခရိုနီတွေဆိုပြီး ပြောလို့ရတယ်။ Cronies ခရိုနီတွေကို သူတို့လိုက်ဖမ်းနေတာ - ဘာကြောင့်လိုက်ဖမ်းနေသလဲဆိုတာကို ကျမတို့အတွက် indicator ညွှန်ပြချက်တခုက အဲဒီ Elite တွေက သူတို့ဘက်ကို မလိုက်ကြတော့လို့။ ဒီဘက်ကို ရောက်လာလို့။ အဲဒါကြောင့်မို့ လိုက်ဖမ်းတယ်လို့ ကျမ ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ ဆိုတော့ နှစ်ခုစလုံးကို ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Defection ဆိုတဲ့ ဥစ္စာက တော်တော်များများ သမိုင်းနဲ့ ပြန်ချိန်းကြည့်ရင် တခါမှ မတွေ့ဘူးတဲ့ အခြေအေနအဆင့် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။
မေး ။ ။ မီမီကိုယ်တိုင် ပါမောက္ခတယောက်အနေနဲ့ အဲဒီမှာ စစ်တပ်အရာရှိတွေ၊ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်တွေမှာ သင်ကြားပို့ချတယ်။ ပညာသင်ကြားပေးတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိရပါတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအခါမှာကော သူတို့တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှု၊ သူတို့တွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အထိန်းအကွပ်အောက်မှာ နေရတဲ့ တပ်မတော်တခု ဖြစ်ရေးကို ဘယ်လောက်စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိတယ်လို့ တွေ့ခဲ့ရပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမ သွားသင်တဲ့အခါမှာ ကျမကတော့ Lt. Colonel ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးအောက် များသောအားဖြင့်နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာတော့ သူတို့တွေက အများကြီး မျှော်လင့်ချက် ရှိကြတယ်။ သူတို့က ကမ္ဘာနဲ့တန်းပြီးတော့ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ တခြားစစ်တပ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့တွေကို လေးလေးစားစားနဲ့ ဂုဏ်ယူစွာ လုပ်ချင်ကြတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျမ သင်ကြားပို့ချတဲ့အခါမှာ တကမ္ဘာလုံးကလည်း မြန်မာစစ်တပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ နည်းနည်းအထင်ကြီးလာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်က ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲ Democratic Transition ကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ လူတွေက တခါတည်းအံ့သြပြီးတော့ သူတို့ကို လက်ခံကြတယ်။ သူတို့ကို တော်တော်လေး ကြိုဆိုကြတယ်။ အဲဒီနေရာကနေ အခုဆိုရင် တခါတည်း သူတို့ကို လုံးဝလူဆိုးလိုမျိုး ထင်ပြီးတော့၊ လုံးဝပစ်ပယ်လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီအထိ တခါတည်းကို ထိုးကြသွားတယ်။ ကျမ စိတ်ထဲမှာလည်း တခါတလေမှာ အဲဒီစစ်ဗိုလ်ကြီးတွေကို ကျမ သူတို့မျက်နှာလေးတွေကို မြင်မိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အနာဂတ်တွေကို အရမ်းပဲစိတ်လှုပ်ရှား၊ တက်ကြွကြတယ်။ အဲဒီအခြေအနေကနေ တခါတည်း အဝီဇိထဲကို ဆင်းသွားတယ်ဆိုတာ သူတို့အတွက်လဲ ကျမ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာ သူတို့ကို တစည်းတလုံးတည်း ဖြစ်နေအောင် Unified လုပ်ထားနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်က ဘာလို့ ပြောနိုင်ပါသလဲ။ ပြည်သူတွေ သူတို့ကို မကြိုက်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတာလဲ သိတယ်။ လက်အောက်က တပ်မတော်ဝန်ထမ်းတွေက မကျေနပ်ကြဘူး။ သူတို့ဘဝ ကျဉ်းကြပ်တယ်။ အထက်အရာရှိတွေနဲ့ မတူဘူးဆိုတာလဲ သူတို့သိတယ်။ သို့သော်လဲ သူတို့က ဘာလို့ တစုတစည်းလုံးတည်း ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တွေ့တာက သူတို့မှာ အားလုံး ဒီလောက်အများကြီးလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဆိုပါတော့ တပ်ရင်းတခုဆိုရင် Full Strength အပြည့်အစုံ ရှိမယ်ဆိုရင် လူ (၈၀၀) ရှိရမယ်။ အခုဟိုတလောက ထွက်လာတာ သူတို့ပြောနေတာ (၁၅၀) လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ အဲဒီရှိတဲ့ (၁၅၀) ထဲမှာလဲ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကပဲ Combat Ready စစ်တိုက်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိတယ်။ ဆိုတော့ (၇၅) ယောက်လောက်ပဲ တပ်ရင်းတခုမှာ ရှိတော့တယ်။ အဲဒီရှိတဲ့လူတွေထဲမှာလဲ သူတို့ပြောတာ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ လုံးဝမတိုက်ချင်ကြတော့ဘူး။ တချို့တွေကြတော့ အရမ်းအသက်ကြီးနေပြီ။ ဆိုပါတော့ Sergeant တပ်ကြပ်ကြီးတွေ - သူတို့တသက်လုံးလည်း စစ်တပ်ထဲမှာပဲ လုပ်လာခဲ့ကြတော့ ဘယ်လိုမှ ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်လဲ စာရေးသောက်ရေး ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီး စိတ်ပူကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တချို့တွေဆိုရင်လဲ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေ။ အခုအချိန်မှာ စစ်တပ်က မိသားစုတွေကိုလည်း တင်းကြပ်ကိုင်ထားတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီဥစ္စာအတွက်လဲ မထွက်နိုင်ဘူး။ နောက်တခါကြတော့ Logistic တကယ်ထွက်ဖို့အတွက်ကလဲ စစ်တပ်က အများကြီးပဲ သူတို့ကို ချုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ အဲဒီအခြေအနေမှာ သူတို့မထွက်နိုင်တဲ့ဟာ အများကြီးရှိသေးတယ်။
မေး ။ ။ နောက်တဘက်ကိုလဲ ကျနော်မေးချင်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ ဖီဆန်နေကြတဲ့ EAOs တိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ PDFs ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ - သူတို့တွေရဲ့ အင်အားကိုရော စစ်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။ သူတို့ရဲ့ ညီညွတ်မှု Unity, Strength တွေကို မီမီ ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဆရာမတယောက်အနေနဲ့ သူတို့ကို B+ အတွေ့အကြုံ မရှိ၊ Training လည်းမရှိဘဲနဲ့ ဒီလောက်အထိ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ချီးကျူးစရာပဲ။ အပြီထိအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကြတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာ A အထိ၊ A+ ရဖို့အတွက် လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ ကျမအနေနဲ့ သုံးသပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
မွနျမာ့အပွောငျးအလဲအတှကျ နိုငျငံတကာ ဖိအားဟာ အငျမတနျ အရေးပါတယျ၊ ဒီအတှကျ အမရေိကနျအစိုးရက ဦးဆောငျကွိုးပမျးနတေယျလို့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ အာရှ-ပစ်စိဖိတျ လုံခွုံမှုလလေ့ာရေးဌာန ပါမောက်ခ မီမီဝငျးဘာ့ချ က ဆိုပါတယျ။ အာဏာသိမျး စဈတပျနဲ့ ဖီဆနျရေးအငျအားစုတို့ရဲ့ လကျရှိအခွအေနကေိုလညျး တခြိနျက မွနျမာစဈအရာရှိတှကေို ပညာသငျကွားပို့ခပြေးခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ ဒုဗိုလျမှူးကွီး (အငွိမျးစား) မီမီဝငျးဘာ့ချ က နှိုငျးယှဉျထားပါတယျ။ အသေးစိတျကို ပါမောက်ခဘာ့ချ နဲ့ ဦးကြျောဇံသာ ဆှေးနှေးသုံးသပျထားပါတယျ။
မေး ။ ။ ပါမောက်ခမီမီဝငျးဘာ့ချ ခငျမြား နိဒါနျးနညျးနညျးပွောစခေငျြတာကတော့ ဦးသိနျးစိနျအစိုးရ တကျပွီကတညျးကစပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံစဈတပျနဲ့ အမရေိကနျစဈတပျ စဈတပျခငျြး ဆကျဆံရေးဆိုတဲ့ ပုံစံတရပျ ရှိခဲ့တယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီဟာကို အကဉျြးရုံးလေးပွောပါ။ ဘယျလိုပုံစံမြိုး ရှိခဲ့သလဲ။ အခုတော့ ပကျြသှားပွီပေါ့။
ဖွေ ။ ။ မွနျမာနိုငျငံ ဒီမိုကရစေီ transition အခြိနျမှာ ကမြတို့က military-military engagement လို ပုံစံမြိုး လုပျတဲ့အခါမှာ တခြို့မွနျမာအရာရှိတှေ ကမြတို့ရဲ့ စငျတာမှာ လာပွီးတော့ ကြောငျးလာတကျကွတယျ။ သူမြားတှကေ ခဏခဏပွောတာ ဒီဟာက training ဆိုကွတယျ။ တကယျတော့ အဲဒါ training မဟုတျဘူး။ ကမြတို့က education ပညာရေး ဖွဈတယျ။ ပညာသငျယူကွတာ။ ကမြတို့ သငျပေးတာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဆကျဆံရေး။ နောကျပွီးတော့ civil-military relation ဒီမိုကရစေီအစိုးရအောကျမှာ အရပျဘကျ-စဈဘကျ ဆကျဆံရေးက ဘယျလိုရှိရမလဲဆိုတာကို တငျပွတာ။
မေး ။ ။ အဲဒီဆကျဆံရေးက အခုတော့ ပကျြသှားပွီပေါ့။ အာဏာသိမျးပွီးတဲ့နောကျမှာ။
ဖွေ ။ ။ ဟုတျတယျရှငျ့။ အခုအခြိနျမှာ US ကနေ အားလုံး sanction လုပျထားပါတယျ။ မွနျမာစဈတပျကို။
မေး ။ ။ အခု ရုရှားက ယူကရိနျးကို ကြူးကြျောပွီးနောကျမှာ မွနျမာစဈကောငျစီက ရုရှားကို အပွတျအသတျ ထောကျခံလိုကျတယျဆိုတော့ အမရေိကနျနဲ့ ဆကျဆံရေးက ပိုပွီးအလှမျးဝေးသှားတယျလို့ ပွောလို့ရမလား။
ဖွေ ။ ။ ရုရှားကို ထောကျခံလို့ အမရေိကနျနဲ့ ဝေးတာက ဘယျလောကျမှ မရှိဘူး။ ပိုပွီးတော့ အမရေိကနျနဲ့ ဝေးသှားတဲ့ဥစ်စာက အာဏာသိမျးတာနဲ့ ဒီမိုကရစေီနညျးနဲ့ တငျမွှောကျထားတဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှကေို ဖမျးဆီးတာတှကေ ပိုပွီးတော့ အရေးကွီးတယျ။
မေး ။ ။ တခြို့က ပွောကွတယျ - အမရေိကနျရဲ့ စဈကောငျစီအပျေါ အရေးယူမှု၊ မွနျမာနိုငျငံ ဒီမိုကရစေီလမျးပျေါ တကျလှမျးနိုငျဖို့အတှကျ အမရေိကနျရဲ့ စှမျးဆောငျမှုတှဟော သိပျထိရောကျမှု မရှိဘူးဆိုပွီးတော့ မွနျမာပွညျသူ တျောတျောမြားမြားက ညညျးတှားကွပါတယျ။ ပညာရှငျတယောကျအနနေဲ့ ဒီပွောဆိုခကျြတှကေို ဘယျလိုပွောလိုပါလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကမြတို့ သမိုငျးမှာ အောငျမွငျသှားတဲ့ တျောလှနျရေးတှကေို ပွနျပွီးတော့ လလေ့ာလိုကျတဲ့အခါမှာ ကမြတို့ ဘာသှားတှသေ့လဲဆိုရငျ အဲဒီမှာ အဓိက (၃) ခကျြပါတယျ။ ပထမဆုံးတခကျြက ပွညျသူလူထုရဲ့ ဆနျ့ကငျြမှု - ပွညျသူလူထု အမြားကွီးရဲ့ ဆနျ့ကငျြမှု။ နောကျတခကျြကတော့ အပွညျပွညျဆိုငျရာက ဖိအား။ နောကျသုံးခကျြမွောကျကတော့ defection - စဈတပျနဲ့ ထိပျတနျးလူတှေ ဘကျပွောငျး၊ စှနျ့ခှါမှု။ အဲဒီအခကျြ (၃) ခုကို သှားတှတေ့ယျ။ ဆိုတော့ ဒီမှာ အပွညျပွညျဆိုငျရာရဲ့ ဖိအားက အရမျးအရေးကွီးတယျ။ အဲဒီအခကျြကွောငျ့လဲ အမရေိကဘကျက ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖိအားပေးရမလဲဆိုတာကို ဆောငျရှကျနတေယျ။ အဲဒီမှာ Sanction ပိတျစို့မှုတှလေညျးပါတယျ။ နောကျ Diplomatic သံတမနျရေးနညျးနဲ့ အာဆီယံနဲ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှနေဲ့ ဥရောပတို့နဲ့ အတူတူပေါငျးပွီးတော့ ဖိအားပေးလုပျကွတယျ။ အဲဒါကွောငျ့လဲ ဖိအားက အမြားကွီးရှိလာတာ။
မေး ။ ။ အခုန မီမီပွောတဲ့ (၃) ခကျြမှာ ပွညျသူလူထုရဲ့ ဆနျ့ကငျြအုံကွှမှု - အဲဒါကတော့ မွနျမာနိုငျငံသမိုငျးမှာ တခါမှမကွုံဘူးတဲ့ ကွီးမားတဲ့ ဆနျ့ကငျြအုံကွှမှုကို တှနေ့ရေတယျလို့ ကနြျောကတော့ သတငျးသမားတယောကျအနနေဲ့ မွငျမိပါတယျ။ ဆိုတော့ ဖိအားကကော လုံလောကျတဲ့ ဖိအား enough pressure ရှိပါရဲ့လား။ လူတှကေ ညညျးတှားကွတယျ - အဲဒီဥစ်စာကို အဲဒါထကျပိုပွီးတော လုပျသငျတယျ။ အမရေိကနျတို့က ဖိအားပိုပေးသငျ့တယျ။ အပွောသာမြားနပွေီးတော့ လကျတှနေ့ညျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကနြျောက အဲဒီကိစ်စကို သိခငျြတာပါ။ အထူးသဖွငျ့ စီးပှားရေးအရ ဒဏျခတျပိတျစို့တဲ့နရောမှာ ရနေံတို့ ဘာတို့ဆိုရငျ အမရေိကနျက မပိတျစို့ဘူး ဖွဈနတေယျ။
ဖွေ ။ ။ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန US State Department က နောကျထပျ Sanction တသုတျ ထပျလာပွနျပွီ။ ဆိုတော့ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ တငျးကွပျဖို့ လုပျနတေယျ။ ဟုတျတယျ - ရနေံကိုလညျး သူတို့ထိနျးခြုပျပါမယျ။ သူတို့ အဲဒီကိစ်စကို အမြားကွီးဆှေးနှေးနပေါတယျ။ ရနေံနဲ့ ပတျသကျပွီး လုပျကွတဲ့အခါမှာ နညျးနညျးလေး Tricky ဖွဈတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စှမျးအငျကဏ်ဍ Energy Sector မှာ မစဉျးစားဘဲ လုပျလိုကျမယျဆိုရငျ သံတမနျနဲ့ ဖိအားထဲမှာ သှားပွီးတော့ ငွိ့နိုငျတယျ။ အဲဒါကွောငျ့မို့ သူတို့ ဒီအပိုငျးကို အမြားကွီးစဉျးစားပွီး၊ အမြားကွီးဆှေးနှေးပွီး လုပျစရာတှေ အမြားကွီးလိုအပျတယျလို့ ကမြ တှမေိ့တယျ။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့လဲ တခုစဉျးစားမိတာက အခု ရုရှားနဲ့ ဖွဈလိုကျတဲ့အခါမှာ ရုရှားရဲ့ ရနေံကို ဒဏျခတျလိုကျတယျ။ အမရေိကနျထကျပိုပွီးတော့ ဥရောပနိုငျငံတှကေ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ ပိုပွီးတော့ အခကျကွုံရတယျ။ ဆိုတော့ ရနေံက ဘယျကရရ ပိုပွီးတော့ လိုအပျနတေဲ့သဘော။ တလောတုနျးကဆိုရငျ အမရေိကနျသမ်မတ Joe Biden က Saudi Arabia တို့ အပါအဝငျ အရှအေ့လယျပိုငျးနိုငျငံတှကေို ရနေံ ပိုပွီးတော့ ထုတျပေးဖို့အတှကျ ခဉျြးကပျတယျဆိုတာကို ကွားရပါတယျ။ အဲဒီနိုငျငံတှကေ လကျမခံကွဘူးတဲ့။ ဆိုတော့ မွနျမာနိုငျငံက ရနေံက ဘာပဲပွောပွော သူတို့အတှကျ ပိုပွီးလိုအပျနလေိုမြား သူတို့ လကျပိုကျကွညျ့နကွေတာလား။
ဖွေ ။ ။ အဲဒီအတှကျကတော့ ကမြ အသအေခြာ မသိဘူး။ ဒါပမေဲ့ သံတမနျအရေး၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဆကျဆံရေးကလညျး ပါသေးတယျ။ ရုရှားနဲ့ ယူကရိနျးကွတော့ ကနျြနိုငျငံတှကေ စုပေါငျးပွီးတော့ ညီညှတျစှာလုပျကွတယျ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ပတျသကျပွီး တူညီတဲ့ စုစညျးမှုကို သိပျပွီးတော့မတှရေ့သေးဘူးဆိုတော့ အဲဒီဥစ်စာကိုမြား ဝိုငျးကွိုးစားနကွေတယျ။ အဲဒီအပိုငျးကို တှကျနတေယျလို့ ကမြ ထငျပါတယျ။
မေး ။ ။ ဆိုတော့ စောစောက မီမီပွောတဲ့ အခကျြ (၃) ခကျြထဲမှာ ဆနျ့ကငျြမှုရယျ၊ ပွငျပဖိအားရယျ၊ နောကျဆုံးအခကျြက ပိုပွီးတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတယျ။ Defection - စဈတပျနဲ့ Elite ဆိုတော့ ကနြျော နားလညျတာက ဥပမာ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှာ ဖွဈတဲ့ကိစ်စမြိုးလား။ ရားမို့ဈ … မားကို့ဈတို့တုနျးက Defect - ဘကျပွောငျးလိုကျကွတယျ။ ပွညျသူဘကျကို ဘကျပွောငျးလိုကျကွတယျ။ အဲဒီပုံစံမြိုးကို ပွောတယျဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာကော အဲဒီလို ဖွဈနိုငျမယျ့ အလားအလာ ရှိပါသလား။
ဖွေ ။ ။ ဖွဈနိုငျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အခုအခြိနျမှာ Defection နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ အမြားကွီး ထှကျလာတယျ။ ထှကျလာတဲ့ လူတှကေိုလညျး မေးလိုကျလို့ရှိရငျ သူတို့ကပွောတာက အထဲမှာ (၇၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျက ထှကျခငျြနပွေီ၊ သူတို့မလုပျခငျြကွတော့ဘူး။ တခြို့တှကေ အမြိုးမြိုးကွောငျ့ မထှကျနိုငျလို့သာ နနေရေတာ၊ သူတို့ရဲ့ စိတျဓါတျ မရှိကွတော့ဘူး။ စဈတိုကျတယျဆိုတာက စိတျဓါတျမရှိလို့ရှိရငျ တိုကျရတာ မလှယျဘူး။ နိုငျဖို့က မလှယျဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒါမြိုး ဖွဈနတေယျ။ နောကျပွီးတော့ Elite အထကျတနျးလှာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လဲ အခုတလောမှာ ခရိုနီတှေ - Elite ဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာဆို ခရိုနီတှဆေိုပွီး ပွောလို့ရတယျ။ Cronies ခရိုနီတှကေို သူတို့လိုကျဖမျးနတော - ဘာကွောငျ့လိုကျဖမျးနသေလဲဆိုတာကို ကမြတို့အတှကျ indicator ညှနျပွခကျြတခုက အဲဒီ Elite တှကေ သူတို့ဘကျကို မလိုကျကွတော့လို့။ ဒီဘကျကို ရောကျလာလို့။ အဲဒါကွောငျ့မို့ လိုကျဖမျးတယျလို့ ကမြ ခနျ့မှနျးလို့ရတယျ။ ဆိုတော့ နှဈခုစလုံးကို ပွနျပွီးတော့ ကွညျ့လိုကျလို့ရှိရငျ Defection ဆိုတဲ့ ဥစ်စာက တျောတျောမြားမြား သမိုငျးနဲ့ ပွနျခြိနျးကွညျ့ရငျ တခါမှ မတှဘေူ့းတဲ့ အခွအေနေအဆငျ့ ဖွဈနတောကို တှရေ့တယျ။
မေး ။ ။ မီမီကိုယျတိုငျ ပါမောက်ခတယောကျအနနေဲ့ အဲဒီမှာ စဈတပျအရာရှိတှေ၊ စဈဦးစီးတက်ကသိုလျတှမှော သငျကွားပို့ခတြယျ။ ပညာသငျကွားပေးတယျဆိုတာကို ကနြျောတို့ သိရပါတယျဆိုတော့ အဲဒီအခါမှာကော သူတို့တှရေဲ့ တုံ့ပွနျမှု၊ သူတို့တှရေဲ့ ဒီမိုကရစေီ အထိနျးအကှပျအောကျမှာ နရေတဲ့ တပျမတျောတခု ဖွဈရေးကို ဘယျလောကျစိတျအားထကျသနျမှု ရှိတယျလို့ တှခေဲ့ရပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကမြ သှားသငျတဲ့အခါမှာ ကမြကတော့ Lt. Colonel ဒု-ဗိုလျမှူးကွီးအောကျ မြားသောအားဖွငျ့နဲ့ ထိတှခေဲ့တယျ။ အဲဒီမှာတော့ သူတို့တှကေ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ခကျြ ရှိကွတယျ။ သူတို့က ကမ်ဘာနဲ့တနျးပွီးတော့ ကမ်ဘာမှာရှိတဲ့ တခွားစဈတပျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ လုပျခငျြတယျ။ အဲဒီလို လုပျတဲ့အခါမှာလညျး သူတို့တှကေို လေးလေးစားစားနဲ့ ဂုဏျယူစှာ လုပျခငျြကွတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ကမြ သငျကွားပို့ခတြဲ့အခါမှာ တကမ်ဘာလုံးကလညျး မွနျမာစဈတပျကိုကွညျ့ပွီးတော့ နညျးနညျးအထငျကွီးလာတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ စဈတပျကိုယျတိုငျက ဒီမိုကရစေီအပွောငျးအလဲ Democratic Transition ကို လုပျပေးလိုကျတယျဆိုတော့ လူတှကေ တခါတညျးအံ့သွပွီးတော့ သူတို့ကို လကျခံကွတယျ။ သူတို့ကို တျောတျောလေး ကွိုဆိုကွတယျ။ အဲဒီနရောကနေ အခုဆိုရငျ တခါတညျး သူတို့ကို လုံးဝလူဆိုးလိုမြိုး ထငျပွီးတော့၊ လုံးဝပဈပယျလိုကျကွတယျ။ အဲဒီအထိ တခါတညျးကို ထိုးကွသှားတယျ။ ကမြ စိတျထဲမှာလညျး တခါတလမှော အဲဒီစဈဗိုလျကွီးတှကေို ကမြ သူတို့မကျြနှာလေးတှကေို မွငျမိတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ သူတို့ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ၊ အနာဂတျတှကေို အရမျးပဲစိတျလှုပျရှား၊ တကျကွှကွတယျ။ အဲဒီအခွအေနကေနေ တခါတညျး အဝီဇိထဲကို ဆငျးသှားတယျဆိုတာ သူတို့အတှကျလဲ ကမြ တျောတျောလေး စိတျမကောငျး ဖွဈမိတယျ။
မေး ။ ။ ဒါပမေဲ့ လောလောဆယျမှာ သူတို့ကို တစညျးတလုံးတညျး ဖွဈနအေောငျ Unified လုပျထားနိုငျတဲ့ အဓိကအခကျြက ဘာလို့ ပွောနိုငျပါသလဲ။ ပွညျသူတှေ သူတို့ကို မကွိုကျမနှဈသကျဘူးဆိုတာလဲ သိတယျ။ လကျအောကျက တပျမတျောဝနျထမျးတှကေ မကနြေပျကွဘူး။ သူတို့ဘဝ ကဉျြးကွပျတယျ။ အထကျအရာရှိတှနေဲ့ မတူဘူးဆိုတာလဲ သူတို့သိတယျ။ သို့သျောလဲ သူတို့က ဘာလို့ တစုတစညျးလုံးတညျး ဖွဈနကွေတယျလို့ ထငျပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ကမြ အငျတာဗြူးတှေ လုပျလိုကျတဲ့အခါမှာ တှတေ့ာက သူတို့မှာ အားလုံး ဒီလောကျအမြားကွီးလညျး မရှိတော့ဘူး။ ဆိုပါတော့ တပျရငျးတခုဆိုရငျ Full Strength အပွညျ့အစုံ ရှိမယျဆိုရငျ လူ (၈၀၀) ရှိရမယျ။ အခုဟိုတလောက ထှကျလာတာ သူတို့ပွောနတော (၁၅၀) လောကျပဲ ရှိတော့တယျ။ အဲဒီရှိတဲ့ (၁၅၀) ထဲမှာလဲ (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးကပဲ Combat Ready စဈတိုကျဖို့ အဆငျသငျ့ ရှိတယျ။ ဆိုတော့ (၇၅) ယောကျလောကျပဲ တပျရငျးတခုမှာ ရှိတော့တယျ။ အဲဒီရှိတဲ့လူတှထေဲမှာလဲ သူတို့ပွောတာ (၇၀) ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ လုံးဝမတိုကျခငျြကွတော့ဘူး။ တခြို့တှကွေတော့ အရမျးအသကျကွီးနပွေီ။ ဆိုပါတော့ Sergeant တပျကွပျကွီးတှေ - သူတို့တသကျလုံးလညျး စဈတပျထဲမှာပဲ လုပျလာခဲ့ကွတော့ ဘယျလိုမှ ထှကျလိုကျလို့ရှိရငျလဲ စာရေးသောကျရေး ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုပွီး စိတျပူကွတယျ။ နောကျပွီးတော့ တခြို့တှဆေိုရငျလဲ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတှေ။ အခုအခြိနျမှာ စဈတပျက မိသားစုတှကေိုလညျး တငျးကွပျကိုငျထားတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီဥစ်စာအတှကျလဲ မထှကျနိုငျဘူး။ နောကျတခါကွတော့ Logistic တကယျထှကျဖို့အတှကျကလဲ စဈတပျက အမြားကွီးပဲ သူတို့ကို ခြုပျကိုငျထားတယျဆိုတော့ အဲဒီအခွအေနမှော သူတို့မထှကျနိုငျတဲ့ဟာ အမြားကွီးရှိသေးတယျ။
မေး ။ ။ နောကျတဘကျကိုလဲ ကနြျောမေးခငျြပါတယျ။ လကျနကျကိုငျပွီးတော့ ဖီဆနျနကွေတဲ့ EAOs တိုငျးရငျးသားတပျတှနေဲ့ PDFs ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျတှေ - သူတို့တှရေဲ့ အငျအားကိုရော စဈရေးကြှမျးကငျြတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတယောကျအနနေဲ့ ဘယျလိုသုံးသပျမိပါသလဲ။ သူတို့ရဲ့ ညီညှတျမှု Unity, Strength တှကေို မီမီ ဘယျလိုသုံးသပျမိပါသလဲ။
ဖွေ ။ ။ ဆရာမတယောကျအနနေဲ့ သူတို့ကို B+ အတှအေ့ကွုံ မရှိ၊ Training လညျးမရှိဘဲနဲ့ ဒီလောကျအထိ လုပျနိုငျတယျဆိုတာ တျောတျောခြီးကြူးစရာပဲ။ အပွီထိအောငျမွငျနိုငျဖို့ကွတော့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှသာ A အထိ၊ A+ ရဖို့အတှကျ လုပျနိုငျကွမယျလို့ ကမြအနနေဲ့ သုံးသပျပေးလို့ရပါတယျ။